अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन कसरी ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक २, २०७४ डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
काठमाडौँ — नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइजति योगदान कृषि क्षेत्रबाट आउँछ भन्ने दुई तिहाइ श्रमशक्ति यसमै निर्भर छन् । कृषि उत्पादन बढेको वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि उच्च रहने गरेको छ । तर यस क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा भन्ने केही सुधार भए पनि सन्तोषजनक छैन ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइजति योगदान कृषि क्षेत्रबाट आउँछ भन्ने दुई तिहाइ श्रमशक्ति यसमै निर्भर छन्। कृषि उत्पादन बढेको वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि उच्च रहने गरेको छ। तर यस क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा भन्ने केही सुधार भए पनि सन्तोषजनक छैन।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा दिएको कर्जा उनीहरूको कुल कर्जाको ४.५ प्रतिशत हुन आउँछ। कृषि तथा वनजन्य उद्योगमा गएको कर्जा समावेश गर्दा कुल कर्जाको ८.८ प्रतिशत हुन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा उक्त कर्जा ६.८ प्रतिशतजति मात्र हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २०७४ असार मसान्तसम्म कृषितर्फ ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ, जुन गत वर्षको त्यही समयको तुलनामा १४.३ प्रतिशतले बढी हो। यसका अतिरिक्त त्यस समयमा खाद्य उत्पादन, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनमा ८५.७४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।
नेपालका २८ वटा वाणिज्य बैंकलाई हेर्ने हो भने २०७४ असारमा सबैभन्दा बढी कृषि विकास बैंकबाट कृषि क्षेत्रमा २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ। यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ७.४ अर्ब ऋण कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको छ। २२ वटा वाणिज्य बैंकले १ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म कृषिमा ऋण प्रवाह गरेका छन्। ३ वटा वाणिज्य बैंकहरूले १ अर्बभन्दा कम ऋण कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन्। कुल कर्जामा कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जा चारवटा बैंकहरूको बाहेक अरूको ५ प्रतिशतभन्दा कम छ, ८ वटा बैंकको त त्यस्तो कृषि क्षेत्रतर्फ गएको कर्जा कुल कर्जाको २ प्रतिशतभन्दा कम छ।
कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई कुल कर्जाको २० प्रतिशत कर्जा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्योगजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न निर्देशित गर्‍यो। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा उक्त २० प्रतिशत कर्जामध्ये कृषि र ऊर्जामा १० प्रतिशत प्रवाह गर्नुुपर्ने व्यवस्था भयो। २०७०/७१ मा कृषि र ऊर्जामा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको अनुपात १२ प्रतिशत पुर्‍याइयो। २०७१/७२ देखि विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई पनि कुल कर्जाको क्रमश: १५ र १२ प्रतिशत कर्जा कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित गर्‍यो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशतसहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ असारसम्ममा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बंैकले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जाको धितोमा वार्षिक ४.० प्रतिशतमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ। साधारण पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्दाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्धित ऋणीबाट ९.० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था छ। पुनर्कर्जा लिएर प्रवाह गरिएको कर्जालाई कर्जा– प्राथमिक पुँजी निक्षेप अनुपात गणना गर्दा समावेश नगरिने व्यवस्था छ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यको बँुदा नं. ७६ मा ‘बढ्दो बेरोजगारी र ग्रामीण क्षेत्रबाट युवा पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न व्यावसायिक तरकारी, पशुपन्क्षी पालन, जडिबुटी, तरकारी र फलफूल खेती, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन, च्याउखेती, जडिबुटी, कृषि भण्डारण, शीत भण्डारण, पशु वधशाला एवं मासुजन्य व्यवसायका लागि वाणिज्य बैंकबाट प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर ६ प्रतिशत नाघ्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। यसका लागि ४ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको तथा १ अर्ब विनियोजन गरिएको’ भनी उल्लेख भएको थियो। त्यही अनरुप ‘युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ जारी गरियो। २०७३ सालमा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी ‘युवालाई व्यावसायिककृषि तथा पशुपन्क्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि’ जारी गरिएको छ।
कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कृषि तथा पशुपन्क्षी व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारबाट ५ प्रतिशत व्याज अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भई सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीबाट व्याज अनुदान बाहेक ५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर नलिनेगरी कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो कर्जाको व्याजदर लगानी अवधिभर वृद्धि गर्न पाइँदैन। कर्जाको अधिकतम सीमा ७ करोड रुपैयाँ छ। प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्याज अनुदान प्राप्त हुनेगरी प्रवाह गर्ने कर्जाको सुरु सीमा ३अर्ब रुपैयाँ रहेको छ र थपका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ।
व्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुने, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा २ वर्ष थप हुनसक्ने प्रावधान छ। १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सामुहिक जमानीमा दिन सकिने व्यवस्था छ। २०७३ चैतसम्म प्रवाह भएको यस्तो कर्जा ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ र यो कार्यक्रम सुरु भएदेखि २०७३ चैतसम्म १७ करोड ७० लाख रुपैयाँ व्याज अनुदान वितरण भएको छ।
नेपालमा कृषिको प्रचुर सम्भावना छ। भौगोलिक र मौसमी विविधताका कारण धेरै प्रकारका कृषि उपज उत्पादन गर्न सकिन्छ। केही सफल कृषकले राम्रै आम्दानी गर्ने गरेका उदाहरणहरू पनि भेटिन्छन्। उल्लेख्य मात्रामा कृषि उपज आयात भइरहेकाले कृषि उपजको बजार राम्रै रहेको आंँकलन गर्न सकिन्छ। २०७३/७४ मा भारतबाट ४.९५ अर्ब रुपैयाँको फलफूल, २.२ अर्ब रुपैयाँको जीवित पशु, २३.६ अर्बको चामल, १०.६४ अर्बको तरकारी, ५.९० अर्ब रुपैयाँको दूधजन्य पदार्थ आयात भएको छ। त्यस्तै त्यही समयमा तेस्रो मुलुकहरूबाट १३.५३ अर्ब रुपैयाँको कच्चा भटमासको तेल र ८.७७ अर्ब रुपैयाँको खानेतेल आयात भएको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्जाल विस्तारका क्रम रहेकाले कृषि कर्जाको पहुँच बढाउन सहज हुने देखिन्छ। यस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरे बमोजिम वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा कृषि क्षेत्रतर्फ थप प्रवाह हुने देखिन्छ। उपलब्ध कर्जाको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने खाँचो पनि छ।
वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रलाई जोखिमका रूपमा लिने गर्छन्, यो क्षेत्र उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन। कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा त्यो क्षेत्रको ज्ञान र अनुभवको पनि अभाव छ। त्यसैले कृषि कार्यका लागि वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा पाउन सहज पनि छैन। कृषि क्षेत्र बढी अनौपचारिक र परम्परागत रहेकाले पनि बंैकिङ संस्थाहरूसंँग विधि पुर्‍याएर कर्जा माग गर्न पनि सक्दैन। बंैकिङ ज्ञान र पहँुचको अभावले गर्दा पनि कृषि कर्जाको माग पनि कमै रहेको छ।
यस परिवेशमा कृषि क्षेत्रमा व्यावसायीकरण, व्यापारीकरण, औपचारीकरण र उद्यमशीलताको विकास गर्नुका साथै बैंकिङ ज्ञान र यसको पहुँच विस्तार, कृषि क्षेत्रमा सहज कर्जाको व्यवस्था र यस क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। साथै किसानहरूलाई सरकारी क्षेत्रबाट उपलब्ध सहुलियतबारे पनि जानकारी गराउनुपर्ने खाँचो छ।
- श्रेष्ठ अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन्।